थाहापाउनु होस् : यस्तो काम गर्छ किबोर्डमा भएका १२ वटा बटनले – Interview Nepal
थाहापाउनु होस् : यस्तो काम गर्छ किबोर्डमा भएका १२ वटा बटनले
काठमाडौं । तपाईको किबोर्डमा भएका कि का बारेमा बारेमा तपाईलाई केकति जानकारी छ ? नियमित रुपमा ल्यापटप तथा डेक्सटपमा तपाईले आफनो काम गरिरहनु भएकै छ । तर, तपाईले प्रयोग गर्ने किबोर्डमा रहेका बटनले के काम गर्छ ? तिनीहरुको प्रयोग के कसरी गर्न सकन्छि भन्ने बारेमा तपाईले कत्तिको विचार गर्नुभएको छ रु वा जानकारी लिने प्रयास नै गर्नुभएको छैन ?